Ogaden News Agency (ONA) – Hay’ada agoonta iyo naafada Ogadeniya oo buug uqaybisay Dugsiyada Dhadhaab ee ay maamusho
Hay’ada agoonta iyo naafada Ogadeniya oo buug uqaybisay Dugsiyada Dhadhaab ee ay maamusho
Posted by ONA Admin	/ January 9, 2013
Wariyaha ONA ee ifo ayaa booqday saaka schoolka xirsimahad integrated acadamy oo kuyaala xerada Ifo. Dugsigan waxaa loo aasaasay agoonta iyo danyarta ogadeniya ee qaxa kusogashay xeryaha dhadhaab waxaana lagubartaa schoolka maadoyinka kala ah Luqada English, Xisab, Science , Luqada Kiswahili iyo dhaman maadoyinka diiniga ah.
Macaliminta waxay isugu jiran kuwa kenyan ah oo xirfada barayaasha leh iyo kuwa kamida bulshada qaxootiga ku joogta kenya. Dugsigan cid si toos ah u kaalmeysa inkastoyna jirin hadana waxaa ay wax ka helaan Haayada Naafada Iyo Aggoonta Ogadeniya oo iyagu ilgaara ku haya dugsigan sidii loo taakuleyn lahaana dadaal dheerna ugu jira. Haayada ayaa dugisigan maanta ugu deeqday Buugaagta wax laga qoro.
Mar aan wax ka weydiinay maamulka dugsiga in buugaagtan ay Ifo kaliya ku egtahay waxa uu noo sheegay headmasterka dugusigu in sadexda xeraba lagaadhiisyay ee Dhadhaab buugaagtan.
Waxaa jira caqabado badan oo lasoo darsa Dugsigan oo ka heysta dhinaca mushaarada macalimiinta iyo adeega kaleba. Sikastoy tahay waxa aad loogu farxo ah in hadana si aad uwanagsan ay usocoto hawlaha schoolka oo aan joogsi laheyn.
Xafiiska ONA Bariga Africa